2019 | Radio Himilo
Arsenal oo dooneysa inay soo qaadato weeraryahanka William Saliba
Mahad Mohamed December 31, 2019
Himilo- Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay udhaqaaqi doonto Saint-Etienne si ay ugala wareegto William Saliba. Horaantii sanadkaan, Arsenal ayaa ogolaatay heshiis ay kula soo saxiixaneyso daafaca dhexe dhamaadka xilli ciyaareedkan, isagoo la siinayay 12 bilood oo dheeri ah ...
Liverpool oo xiiso u qabta mid ka mida daafacyada Sevilla
Himilo- Kooxda Liverpool ayaa ku biirtay loolanka loogu jiro saxiixa daafaca kooxda Sevilla Diego Carlos ka hor suuqa kala iibsiga bisha Janaayo. Markii uu ka tagay Nantes kuna biiray kooxda La Liga ka dhisan xagaagii, Carlos ayaa laftiisa noqday nin ...
Himilo- Marka qofku gaajada dareemo, meesha ugu fudud ee uu ka heli karo cunno uu ku haqabeelo ayuu abbaaraa isaga oo hadba ku tashanaya wixii jeebkiisa ku jira ama lacagta uu sito inta ay la egtahay. Haddayse qofku ku adkaato ...
Watford oo u dhaw inay AC Milan kala soo wareegto Ricardo Rodriguez
Mahad Mohamed December 30, 2019
Himilo- Daafaca AC Milan Ricardo Rodriguez ayaa lagu soo waramayaa inuu bartilmaameed u yahay kooxda Watford. In kasta oo Rodriguez uu si joogto ah uga ahaa safka hore Milan tan iyo markii uu San Siro usoo dhaqaaqay July 2017, xiddiga ...
Arsenal iyo Tottenham oo diyaar u ah inay 50 milyan ku bixiyaan 21 jir daafac ah
Himilo- Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u yihiin inay dalab rasmi ah ka gudbiyaan daafaca RB Leipzig Dayot Upamecano inta lagu jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo. Tan iyo markii uu u dhaqaaqay kooxda Jarmalka ...
Wax ka ogow dalalka ugu wasakhda badan caalamka
Himilo- Inta badan, qof kasta kaalin ayuu ku leeyahay wasakheynta oo gaartay heer aan laga aamusi karin caalamka oo dhan xilli ol-olaha wacyi-gelinta u muuqdo mid aan ku dhammeystirneyn. Dalalka dunida ayaa immika la tacaalaya wasakhda hawada, waxaa jira dalal ...
Nin Sacuudiyaan ah oo jaceyl ku khiyaanay gabar Hindi ah
Himilo- Booliiska dalka Hindiya ayaa gacanta ku dhigay nin u dhashay Sacuudiga oo gabar Hindi ah ka ballan qaaday guur islamarkaana uga baxay markii uu ka qaatay lacag badan. Sida uu qoray wargeyska Daily Mail, ninka dhallinyarada ah ayaa gabadha ...
Real Madrid oo u sheegtay Zidane inuu iska ilaawo Pogba
Mahad Mohamed December 29, 2019
Himilo- Real Madrid ayaa ku wargalisay tababareheeda Zinedine Zidane in kooxda aysan u dhaqaaqi doonin ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba sannadka 2020. Los Blancos ayaa si xoogan loola xiriirinaayey ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka France intii lagu ...
Trent Alexander-Arnold oo meesha ka saaray ka tagista Liverpool
Himilo- Daafaca Liverpool Trent Alexander-Arnold ayaa soo jeediyay inuu qorsheynayo inuu mustaqbalkiisa oo dhan ku qaato Anfield isagoo doonaya inuu noqdo “halyeeyga naadiga”. 21 jirka ayaa ku riyaaqay ololihi wacnaa ee 2018-19 ee kooxda Jurgen Klopp wuxuuna markale qaab ciyaareed ...
Yakutsk: Magaalada ugu qabowga badan caalamka
Himilo- Inta badan dalka Ruushka waa qabow laakiin waxaa jirta magaalo qaadatay rikoorka qabowga ugu badan caalamka. Yakutsk waa magaalo ku taalla bariga fog ee Ruushka, wax badan kama foga cirifka waqooyi. Waxaa laga diiwaan geliyay qabowgii ugu darnaa dunida ...